Loko Mena, Fijokoana ary Fanafihana An-tserasera: Manameloka Ny Firongatry Ny Herisetra Ny Gazety Mpanohana An’i Beijina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2017 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, русский, Español, Français, English
Nosoratan'i Elie Ng ity lahatsoratra ity ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 Febroary 2017. Ity dika manaraka ity dia navoaka eto amin'ny Global Voices tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Nolazain'ny Sing Pao fa toa midika ho fampanginana ny gazety ireo fandrahonana, izay fantatra amin'ireo fanafihana tsy mitonona anarana ataony amin'ilay sendikà politika mifandray amin'ny manampahefana ambony, Zhang Dejiang, Leung Ying ary ny Biraon'ny Fifandraisana.
Tamin'ny herinandro lasa teo, namoaka fanambarana maika ilay gazety nilazàny fa misy olona nandefa trakta fandrahonana ireo mpiasa mpitantana ao amin'izy ireo teny ivelan'ny tranony. Manambara izy fa ireo sary ao anatin'ilay trakta dia toa nalaina avy tamin'ny taratasy fahazoana mivezivezy omen'ny manampahefana Shinoa ho an'ny teratany ao Hong Kong ahafahan'izy ireo miditra ny taniben'i Shina.
Milaza koa izy (ny gazety) fa mety tsy hahazo hilatsaka ho fidiana i Leung, andro vitsy talohan'ny nilazan'ilay lehiben'ny mpanatanteraka fa mety hilatsaka fanindroany izy.
Nitarika sahoan-dresaka hoe misaratsaraka ireo mpanohana an'i Beijina any Hong Kong ireo fandrahonana ireo, ary voaomana hamongotra sehatra iray mahery vaika ao anatin'ny antoko Kaominista ny Filoha Shinoa Xi Jinping.